Imiklamo yePoseidon Tattoo | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
AmaTattoos kaPoseidon, unkulunkulu wezilwandle
Nathi Cerezo | | Ama-tattoos, AmaTattoos amahle
Namuhla sifuna ukwabelana nawe ngencazelo yamaPoseidon tattoos, umklamo ongabonakala ungawusebenzisi kangako, yize kunezindawo lapho ukhona.
Sikhuluma ngama-tattoos we UPoseidon noma uNeptune kuya ngesiko (isiLatin noma isiGrikhi), kuwuphawu lwamanzi, olwandle nolwandle. Abantu abaningi abasebenza olwandle bakhethele le nto yabo ama-tattoos onkulunkulu, njengophawu lokuvikelwa kwabo.
1 Inhlanzi enkulu e-Olympus
2 Iyini incazelo yale tattoo?
3 Imibono ye-Poseidon tattoo
3.1 Ulwandle, umbuso kaPoseidon
3.2 Ama-Mermaids nezinye izakhamuzi zasolwandle ezinganekwane
3.3 Ihlengethwa, ukugeleza kolwandle
3.4 Amahhashi, olunye uphawu lwakhe
3.5 I-trident, uphawu lwayo olukhulu
3.6 UTriton, indodana kaPoseidon
3.7 Iplanethi iNeptune
3.8 Isethenjwa se-Odyssey
3.9 Futhi kunjalo uPoseidon
Inhlanzi enkulu e-Olympus
UPoseidon ungomunye wonkulunkulu abayishumi nambili base-Olimpiki, okumenza wadutshulwa eParthenon. Wayengumfowabo omncane kaZeus, owayephethe umhlaba nomoya. UPoseidon, ngakolunye uhlangothi, kwakufanele abe yinkosi yezilwandle. Ngokuphambene nalokho, iHayidese, umfowabo wesithathu walo mndeni wonkulunkulu, wayephethe ukuphatha izwe elingaphansi komhlaba.
Ngaphezu kolwandle, uPoseidon wayekhulekelwa njengonkulunkulu wokuzamazama komhlaba, futhi nge-trident yakhe yomlingo wakwazi ukwenza iziphethu zivele noma kuphi lapho ethanda khona futhi abize neziphepho. Futhi, noma wayengunkulunkulu wezilwandle, UPoseidon wayekhetha ukuhamba ngomshayeli wenqola kunesikebhe, njalo edonswa yizilo uhhafu wehhashi inyoka yolwandle.
Ngaphezu kwalokho, uPoseidon wayengumnikazi oziqhenyayo wesiqhingi osekuyinsumansumane: the Atlantis.
Iyini incazelo yale tattoo?
I-Los Ama-tattoos kaPoseidon afuna ukuthola ukuvikelwa kwalo nkulunkulu, okwathi lapho enomoya omuhle wanikeza izilwandle ezinokuthulaKungakho kungumklamo owaziswa kakhulu ngabantu abasebenza olwandle. Ngaphezu kwalokho, i-trident yakhe ingeza inani encazelweni yayo, ngoba i-trident iwuphawu lokuvumelana, ingqondo, umzimba nomoya, kanye nokwedlule, okwamanje nokwesikhathi esizayo. Kulungile? Mina uqobo ngiyakuthanda ukufanekiselwa kwalo.
Imibono ye-Poseidon tattoo
Ake sibone ezinye imiklamo yalo nkulunkulu, uPoseidon esikhumbeni sethu.
Ulwandle, umbuso kaPoseidon
Ulwandle luhamba ibanga elide ku-tattoo. Impela kungaba ngumklamo uPoseidon uqobo azowukhetha uma efuna ukuthola i-tattoo. Ukukuhlobanisa nonkulunkulu, ungambonisa ukuthi uphuma emanzini, noma umane nje abe ne-trident (ophuzi wensimbi nohlaza okwesibhakabhaka kolwandle kuhle). Ukukhombisa ukufutheka kwakhe, ukhetha ulwandle olunqunu noma ngisho nesivunguvungu phakathi kwamanzi.
Ama-Mermaids nezinye izakhamuzi zasolwandle ezinganekwane
Eqinisweni, ama-mermaid ayengeyona indlela esibazi ngayo ezikhathini zasendulo, kusukela babenomzimba wenyoni esikhundleni somsila (Umsila ungezwe enganekwaneni kuze kube yilapho kungabi ngaphansi noma ngaphansi kweNkathi Ephakathi). Ngaphezu kwalokho, babengenabo ubudlelwano noPoseidon, ngoba babephuma kwabanye onkulunkulu bomfula. Kodwa-ke, njengoba ungumhlali odumile wezilwandle, ungahle ulingeke ukwenza umklamo onabo njengabaphikisi.
Ihlengethwa, ukugeleza kolwandle
Amahlengethwa anokuxhumeka okungalindelekile kakhulu noPoseidon, njengoba engabaphikisi kwenye yezinganekwane zakhe ezidume kakhulu, ichaza imvelaphi yenkanyezi eyiDolphin (Noma ungahle ungafuni ukuthola i-tattoo ngemuva kokuhlangana naye).
Inganekwane ithi u-Amphitrite, uNereid, wacasha e-Atlantis ukuze abalekele uPoseidon, owayefuna ukumshada. Noma kunjalo, omunye wabazingeli bakankulunkulu, ihlengethwa, wamthola kwesinye seziqhingi zase-Atlantis futhi wamletha phambi kukankulunkulu, okwathi, ngokubonga, wanika ihlengethwa indawo phakathi kwezinkanyezi.
Amahhashi, olunye uphawu lwakhe
Uma ucabanga ukuthi akekho umuntu ongakushaya ebumnyameni, ukubona ukuthi ungaba yini nesibindi sokudweba ihhashi bese utshela abantu ukuthi empeleni kubhekiswe kuPoseidon, umvikeli wamahhashi, owayewathanda kakhulu kangangokuba wahamba namahhashi olwandle (yize iningi linemisila yezinyoka zasolwandle, kufanele kushiwo konke). Empeleni, Esikhathini esedlule, amatilosi ayenikela ngamahhashi ngokuwaminza olwandle ukuze athathe uhambo oluphephile. Uma ukhetha okukodwa kwalokhu, akekho ozoshaya okwangempela, kunjalo.
I-trident, uphawu lwayo olukhulu
Sesikhulume ngakho I-trose kaPoseidon, uphawu olukhulu lwalo nkulunkulu. Ngayo wayekwazi ukubiza izivunguvungu futhi ameme imithombo. Ngaphandle kokungabaza wayezozizwa enqunu ngaphandle kwakhe, ngakho okuvame kakhulu ukumbona ephelezelwa nguye. Noma kunjalo, ungakhetha ukwakheka okulula, nge-trident kuphela, ngokwesibonelo.
UTriton, indodana kaPoseidon
Njengabo bonke onkulunkulu basendulo, UPoseidon wayenenzalo eningi, yize mhlawumbe edume kakhulu yiTriton, futhi indodana yendoda empofu i-Amphitrite, iNerea esikhulume ngaye ngaphambili. I-Triton imelwe njenge-merman, okungukuthi, enomsila wenhlanzi nomzimba womuntu, yize ezinye izethulo ezinomsila we-lobster noma ngisho nezinzipho kungavamile.
Uma into yakho kungama-Poseidon tattoos abhekise kunkulunkulu ngendlela emnyama (kepha awuwuthandi umqondo wamahhashi), ungayeki ukuyimela ngeplanethi yayo, iNeptune, ethatha igama layo kusukela enguqulweni yesiLatini kaPoseidon. Kubukeka buhle kumdwebo omncane onombala omuhle oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ingabe bewazi lokho UPoseidon yisona sizathu esenza u-Ulysses ompofu angakwazi ukuya ekhaya? Unkulunkulu uthukuthela kakhulu aze amlahle ngokuzulazula olwandle iminyaka. Ngakho-ke, indlela ehlukile yokukhumbula lo nkulunkulu ukwenza ireferensi kulezi zincwadi zakudala, izaba ezifanele zokufaka isilinganiso ngesiGreki.
Futhi kunjalo uPoseidon
Futhi phakathi kwemidwebo kaPoseidon, yebo, ukubhekisela kunkulunkulu ngokwakhe kwakungeke kube khona. Imelele uthukuthele noma ujabule, noma ngabe kunjalo, kuhlale kungumbono omuhle ukumphelezela nge-trident yakhe ethembekile. Kubukeka kukuhle ikakhulukazi ngesitayela esingokoqobo, esinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okwakha kabusha ubuhle bolwandle.
Ama-poseidon tattoos akhuthazwa unkulunkulu wezingalo okufanele awuthathe, akunjalo? Sitshele, uyini umklamo wakho owuthandayo? Ngabe ucabanga ukuthi kukhona esikuphuthele? Khumbula ukusitshela kumazwana abekiwe!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » AmaTattoos amahle » AmaTattoos kaPoseidon, unkulunkulu wezilwandle
Amathambo kaHarry Styles